Indlela yokwenza iBombs Bombs Bombala (Okwenziweyo Ukusebenza)
Indlela Yokwenza Iibhola Zobumnyama Bombala
Iingcebiso kunye neenjongo zokwenza umsi wombala
Iibhobho zomlilo zisoloko zilula ukwenza kwaye zivelise iziphumo ezintle, ezinokwethenjelwa. Usenokucinga ukuba ukwenza umsi wombala kulula nje ngokungongeza imichiza evuthayo ... kakuhle ... umsi wombala. Nangona kunjalo, kunzima kakhulu kunokuba kuba ezininzi iikhemikhali zivelisa umhlophe, umdaka okanye umsi ophuzi ophezulu. Kukho imiqulatho yomsi wombala obandakanya ukudibanisa kwidayi ekhethekileyo eyovelisa ifu elimnyama xa idayi iphefumlelwe.
Le projekthi ibhekiselele, kodwa kunzima ukufumana iziphumo ezilungileyo kuba umgomo kukutshisa idayi, kodwa ungayixhasi, uze uyiqhube emoyeni. Nazi ezinye izicwangciso zokuqinisekisa ukuphumelela:
Qinisekisa ukuba usebenzisa idayi efanelekileyo.
Awuyi kutshisa nayiphi idayi endala yamabhomu ebomvu! Idayi yokuhlamba, umzekelo, ayiyi kusebenza. Imizekelo yamacandelo asebenzayo afaka i-para-nitroaniline ebomvu, i-auramine (ephuzi) kunye ne-indigo (synthetic indigo). Kukho ezinye iindiza eziza kusebenza. Unokudibanisa idayi ukuze ufumane imibala eyahlukileyo.
Ukulinganisa izithako ngesisindo, kungekhona ngokuvakala.
Ubungakanani bezithako zibalulekile. Umthamo wezithako unokuchaphazeleka ngendlela abaye baqhutyelwa ngayo, ngoko ubunzima bendlela efanelekileyo yokulinganisa.
Qinisekisa ukuba izinto ezifanelekileyo zenziwe ngopompo.
Nangona unayo imichiza efunekayo, awuyi kukwazi ukufumana iziphumo ezilungileyo ngaphandle kokuba ukuhambelana komxube kulungile. Oku kuyinyaniso kwiinkqubo ezininzi ze-pyrotechnic, ngoko uyazi ukuba oku. Ukuba awuboni iziphumo ezilungileyo, yenza kwakhona umxube, usebenze izithako ngokuhlukileyo kwikhofi okanye kwisipilisi ngaphambi kokuba uzixube kunye. Ungalokothi ukhuphe i-oxidizer kunye ne-fuel kwi-container efanayo, kuba umlilo ungabangela. Sebenzisa i-grinder ehlukeneyo yeekhemikhali ezifana ne-potassium chlorate kunye ne-nitrate ye-potassium.
Qinisekisa i-canister ye-grenade yomsi.
Ukuba wenza umsiza womsi, ohlose ukudubula umsi womsi womsi, kufuneka uqinise iphepha okanye amakhadibhodi ukuze kungabikho phantsi kwengcinezelo, ukuphazamisa umphumo wakho. Kuqhelekileyo ukwenza iiblue zebhodi zebhodi kwi-bottom of cylindrical smoke grenades. Ungayifaka i-tape okanye i-masking tape ejikeleze isitya ukunika amandla. Tape nge-fuse ukuze umsi ube nevulo elincinci. Oku kuya kubangela ukuba umsi uphucule phambili.
Bend i fuse kwicala uze uyiphande.
Ngokufanayo, awufuni ukuba ibhomu lumoya liqhube i-fuse ngaphandle kwe-canister ngaphambi kokuba umsi ufike. Ukuba ugoba i-fuse kwicala kwaye uyibhawule phantsi, kunokushiya i-fuse emele ngqo kwi-tube, uza kunciphisa ithuba lokuba ibhokhwe yomsiyi ayiyi kukhanya. Musa ukukhathazeka, ilangabi liya kuhlala lihamba phantsi kwefomu ekhompyutheni ukuya ebhosini lomsi.
I-Gram Stain Procedure kwi Microbiology
Indlela yokwenza i-Ice Spikes kwi-Freezer yakho
I-Baking Powder Recipe
Izikolo eziPhakamileyo zeKhemistry
Phenduka Amanzi abe yiGoli eTywala
Indlela yokufumana iFluoride ngaphandle kwamanzi
Indlela yokwenza i-instant sorbet kwi-Baggie
I-Candy Glass Icicle Decor
Indlela yokwenza iPhepha leNgcaciso
Indlela yokwenza i-Cloud Chamber
Indlela yokwenza iNtappearing Ink
Ziziphi iifilimi ngolwimi?
Imbali ye Tikal
Iimpawu eziziwayo malunga neengelosi ze-Guardian
ISUNY I-Cortland Admissions
Iinkcukacha ezibalulekileyo malunga ne-Edmonton, iNqununu yase-Alberta
Wavelength Inkcazo kwiSayensi
I-Fish Simple Trolling Techics Basics
Iingxaki zokuBumba kwamaPesenti
I-clock ye-Astronomical Clock-Ixesha elingaziwayo
Konke malunga ne-Être, isiFrentshi esiFrentshi
Oko Kufuneka Ukwazi Ngayo 'Iimpawu zeeMifanekiso zeSimpsons'
Abaqambi beBritish Classical Music Composers
Iiplanethi eziLawulayo zeZodiac Signs
Iiprojekthi zeNzululwazi zeSayensi
I-Great Science Fiction Anime
Iingcebiso zokuSebenza koManzi eziVulayo
Yintoni uMxube kwiKhemistry? Inkcazo kunye nemizekelo
Indlela yokubhala "Into endiyenzayo kwiholide lam" Inqaku
I-Chevy Nova Engazange Ihambe
Ngaba kulula iLatini?
Iinqwelo eziphezulu zeTable Tennis Tennis